Foreignlọ Ọrụ Ofesi UK gbanwere ndụmọdụ njem maka Tunisia
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Foreignlọ Ọrụ Ofesi UK gbanwere ndụmọdụ njem maka Tunisia
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akụkọ UK na -agbasa
UK Foreign & Commonwealth Office taa agbanweela ndụmọdụ njem banyere Tunisia. Ọ naghịzi adụ ọdụ ka ọ ghara ịga njem n'ọtụtụ mba, gụnyere Tunis na ndị njem njem nleta.
Kemgbe mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na Bardo National Museum na Sousse na 2015, nke ndị Britain iri atọ na otu nwụrụ, Gọọmentị ka na-enyocha nyocha nke ihe egwu dịịrị ndị mba Britain na-aga Tunisia na nyocha oge niile. Ya na Gọọmentị Tunisia na ndị mmekọ mba ụwa rụkọkwara ọrụ ọnụ iji kwado mmezi nke usoro nchekwa nke Tunisia.
N'ịbụ ndị ji nlezianya nyochaa ọnọdụ na Tunisia - gụnyere egwu nke iyi ọha egwu na ndozi site na ndị ọrụ nchebe Tunisia - Gọọmenti kpebiri na ndụmọdụ njem ya kwesịrị ịgbanwe.
Mịnịsta nke Middle East na North Africa Alistair Burt kwuru, sị:
“Ndụmọdụ anyị banyere njem ga-enyere ndị mmadụ aka ime mkpebi nke ha nke ọma gbasara njem ndị mba ọzọ. A na-enyocha ndụmọdụ maka Tunisia na maka mba ọ bụla.
“Mmelite a gosipụtara nyocha ọhụrụ anyị na ihe egwu dịịrị ndị mba Britain na Tunisia agbanweela. Nke a bụ akụkụ ụfọdụ n'ihi nkwalite nchebe nke ndị ọchịchị Tunisia na ụlọ ọrụ ndị njem nleta mere kemgbe mwakpo ndị na-eyi ọha egwu na 2015, site na nkwado sitere na UK na ndị mmekọ ụwa.
"Ọ bụ ezie na anyị na-agbanwe ndụmọdụ megide njem niile dị mkpa na ọtụtụ n'ime Tunisia, enwere nnukwu ihe egwu maka ndị mba Britain ma ana m akwado ndị mmadụ ka ha gụọ ndụmọdụ njem anyị tupu ha eme atụmatụ njem ha."
Ndị na-eyi ọha egwu nwere ike ịwakpo na Tunisia, dịka n'ọtụtụ mba ndị ọzọ. Enweghị njem ọ bụla na-enweghị ihe egwu ma Gọọmenti na-agba ndị mmadụ ume ka ha nọgide na-enyocha ndụmọdụ njem kachasị ọhụrụ tupu ha agaa ma mee mkpebi nke aka ha gbasara ma ha agaghị aga. UK na-aga n'ihu na-adụ ọdụ ka ịghara njem na mpaghara ụfọdụ na Tunisia, gụnyere ndị nọ nso na mpaghara Libya na mpaghara ndị agha emechiri.
Enwere ike ịchọta ndụmọdụ ndụmọdụ njem kachasị ọhụrụ na Tunisia ebe a, ebe ndị ọbịa nwekwara ike ịdenye aha na ọrụ email iji mee ka ị mata oge ọ bụla a na-emezi ndụmọdụ njem njem Tunisia.
Enweghi mwakpo ọ bụla nke ndị na-eyi ọha egwu na-elekwasị anya ndị njem nleta si mba ọzọ na Tunisia kemgbe Sousse na June 2015.
UK na-eme nyocha nke njem nke aka ya. Agbanyeghị, mgbanwe ndị a na-eweta ndụmọdụ UK ọzọ na ndị mmekọ dị mkpa - gụnyere US, France, Italy na Germany.